Euro In Oo shilin Soomaali taariikhda qiimaha sarrifka (2022)
Euro In Oo shilin Soomaali taariikhda qiimaha sarrifka taariikhda tan 1999 ilaa 2022. Lacagta shaxda diinta Euro In Oo shilin Soomaali (2022).
Waxaad ka ogaan kartaa taariikhda Euro to Oo shilin Soomaali halkan sannad kasta iyo xilli kale. Taariikhda sicirka isdhaafsiga internetka ee sanad walbo waa halkan. Euro taariikhda taariikh kasta ha noqotee. Dhammaan xigashooyinka Euro to Oo shilin Soomaali laga soo bilaabo 1992-kii 2022 waa kuwan. Euro to Oo shilin Soomaali sicirka isdhaafsiga laga bilaabo 1992 ilaa 2022 ayaa halkan lagu muujiyey.
Shaxanka taariikhda isweydaarsiga qiimaha Euro to Oo shilin Soomaali, waxaad arki kartaa taariikhda dheer ee isbeddelka qiimaha lacagta. Garaafka taariikhda Euro to Oo shilin Soomaali laga soo bilaabo 1992 oo laga soo xiganayo sanad walba. Taariikhda sarrifka shaxanka ee dhammaan lacagaha ay 30 sano ka galeen websaydhka moneyratestoday.com Si aad u ogaato heerka saxda ah ee sanadkii la soo dhaafay, ku kor maro garaafka taariikhda Euro to Oo shilin Soomaali. Garaafka heerka sarrifka taariikhda ayaa leh dadaalo isdhaafsi. Ka gudub garaafka
Beddelaan Euro In Oo shilin Soomaali Euro In Oo shilin Soomaali Heerka Sarrifka Euro In Oo shilin Soomaali ku nool suuqa sarrifka Forex
May 2022 605.039233
April 2022 664.543074
March 2022 583.808335
February 2022 643.267546
January 2022 656.445216
Taariikhda Isweydaarsiga qiimaha Euro to Oo shilin Soomaali ayaa miiska jooga sanad walba. Jadwal internet ah oo ka hadlaya taariikhda xigashooyinka Euro / Oo shilin Soomaali lacagta sanad walbo ilaa 1992 waxaa lagu sameeyay boggan. Taariikhda sarrifka shaxdan: Euro to Oo shilin Soomaali waxaa la helaa sanad walba: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Xigashooyinka billaha ah Euro to Oo shilin Soomaali, waad arki kartaa haddii aad gujiso isku xirka sanadka ee jadwalka taariikhda sanadka. Si loo arko Euro to Oo shilin Soomaali xigashooyinka bil kasta, guji xiriirinta jadwalka sanadaha.
Isbeddel ku yimaadda heerka sarrifka muddo dheer ayaa si muuqata looga arki karaa boggayaga taariikhda qiimaha sarrifka. Isbeddelka sicirka sarrifka ee Euro to Oo shilin Soomaali muddo dheer ayaa si muuqata looga arki karaa boggan taariikhda qiimaha isdhaafsiga. Kordhinta iyo hoos udhaca Euro / Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka sanadkasta: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 1999 , 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 years. Boggeenna waxaa ku yaal taariikh ah qiimayaasha lacagaha oo dhan marka loo eego dhammaan.
Xullo lacag halka a Euro si aad u ogaato taariikhda heerka sarrifka ay ku gashay Oo shilin Soomaali. Kaydkeena keydka waxaad ka arki kartaa taariikhda lacag kasta wixii kale sanadihii lasoo dhaafay. Euro ilaa Oo shilin Soomaali 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020. Taariikhda Euro sicirka sarrifka ee sanadka la xusho ayaa bilaash ah haddii aad gujiso xiriirinta sanadka ee miiska taariikhda xigashada.